Restoring Family Links | Tallooyinka badbaadada ee muhaajiriinta
Maxaad sameyn kartaa? /
Tallooyinka badbaadada ee muhaajiriinta
Ku xifdi lambarada taleefonka qoyska qalbi ahaan.
U sheeg xubnaha qoyska iyo saaxibada wadada scodaalka aad qorsheyneysid inaad isticmaashid.
Isku day inaad heshid boostada Laanqeerta Cas ama Bisha Cas sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah kadib markii aad xiriir la lumisid xubno walboo qoyska ah.
Xifdi dhammaan ciwaanada xubnaha qoyskaaga iyo saaxibada.
Hubi in adiga iyo qoyskaaga isticmaashaan jaakadaha nolosha ku haboon.
Haddii aad la safreysid carruurta, ku caawi iyaga inaad xifdisid warbixinta wax ku oolka ah, sida magacyada waaladiinta.
Ogeysii safarkaaga xubnaha qoyska waqti ku waqti iyo halka aad joogtid.
Haddii aad lagu xiro, u sheeg booliska inaadan rabin inaad kala go’daan qoyskaaga.